ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် (အပိုင်း - ၇) - For her Myanmar
ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် (အပိုင်း – ၇)
ထားတို့ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နာနာဘာဝတွေ၊ ဝိဉာဉ်တွေ ရှိနေတယ်။ ပြီးတော့ ထားကလည်း ကို မြင်နေကျ ပုံစံမျိုး မဟုတ်နေဘူးလေ
အခန်းထောင့်ဆီမှ ခေါ်သံကြားရသည်။ တိုးညှင်းသော အသံဖြစ်ပေမဲ့ သူ မကြားရတာ ကြာပြီဖြစ်သော ထားအသံဆိုသည်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းသိသည်။ ထို့ကြောင့် အသံလာရာဆီကို သူ တစ်လှမ်းချင်း ရွေ့သည်။ နံရံပေါ်ကိုလည်း လက်နှင့် စမ်းကာ မီးခလုတ်တွေကို ရှာနေမိသည်။
“မီးဖွင့်လိုက်ရင် ကို မမြင်သင့်တာတွေ မြင်သွားမှာစိုးလို့။”
“ဘာများလဲလို့ ထားရယ်။ ထားရဲ့ အဝတ်မပါတဲ့ ကိုယ်လား.. ကို မြင်နေကျပဲဟာ။ ဘာမှ မထူးဆန်းပါဘူး အချစ်ရဲ့။”
Related Article >>> ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း – ၆)
“မဟုတ်ဘူး ကို။ ထားပြောတာ ကို သဘောမပေါက်ဘူး။ ထားတို့ဘေး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နာနာဘာဝတွေ၊ ဝိဉာဉ်တွေ ရှိနေတယ်။ မီးဖွင့်လိုက်ရင် သူတို့ကို ကို မြင်ပြီး လန့်သွားမှာ စိုးလို့။ ကို ကြောက်တတ်တာ ထားသိပါတယ်။ ထား စကားနားထောင်နော်။ ပြီးတော့ ထားကလည်း ကို မြင်နေကျ ပုံစံမျိုး မဟုတ်နေဘူးလေ”
“ဟုတ်ပါပြီ ထား ကမဖွင့်စေချင်လည်း ကို မဖွင့်တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ထား က ဘယ်လိုလို့ ဒီရောက်နေတာလဲ။ ဒါ ကိုတို့ အိမ်မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ကိုတို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင်နော်။”
“ထား ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ ပြောပြလို့မရဘူး ကို။ ထားတို့အိမ် မဟုတ်တာတော့ ကို မှန်တယ်။ ဒီနေရာက ထား တို့အိမ်မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ထား တို့ ဝိဉာဉ်တွေကတော့ သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ဒီမှာ ခဏနေရတယ် ကို။”
“သေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း ဟုတ်လား ထား။”
“ဟုတ်တယ်လေ ကို ရဲ့။ ကို မေ့နေပြန်ပြီလား။ ထား သေသွားပြီးပြီလေ ကို။ ထား တို့ သေဆုံးပြီး ဘယ်နေရာကို သွားရမယ် ဘာတွေကို ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စီရင်ချက် မကျမချင်း ထားတို့ ဒီမှာပဲ နေရမှာ။ ဒီနေရာကို ကို ဘယ်လို ရောက်လာလဲဆိုတာ ထားလည်း သေချာ နားမလည်ဘူး။”
“တော်ပြီ ထား။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေ မပြောနဲ့တော့ ကို တို့ အိမ်ပြန်ကြရအောင်။ ကို ထားကို လာခေါ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။”
“အဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေ ပြောနေတာ ကို ပါ။ သေဆုံးပြီး လူတစ်ယောက်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီး လူ့ဘဝကို ပြန်သွားနိုင်မှာလဲ။ ကို သာ အိမ်ရောက်အောင် ကောင်းကောင်းပြန်ပါ။ ပြီးတော့ ထားကို မေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ဘဝသစ်တစ်ခုကို မြန်မြန်တည်ဆောက်ပါ ကို။ ကို့အနားမှာ ထားလိုမျိုး နားလည် ပေးနိုင်မယ့် မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို အမြန်ဆုံးရအောင် ရှာပါ။ ကိုက တစ်ယောက်တည်း နေနိုင်မယ့်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထားကောင်းကောင်း သိပါတယ်။”
Related Article >>> ပြန်ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင်… (အပိုင်း – ၅)
“တော်ပါတော့ ထားရယ်။ မှားခဲ့တာတွေအတွက် ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကို့ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတော့နော်။”
“ကို အခုထိ နားလည်သေးဘူးလား။ ထားတို့ ဘဝချင်း ခြားနေပြီ ကို။ ထား ပြောတာ ကို သဘောပေါက်သင့်တယ်။ ဟော ဟို ပြတင်းပေါက်ကိုကြည့်။ နေရောင်ဝင်လာပြီ။ ကို အိမ် မြန်မြန်ပြန်တော့။ ထားတို့ ဒီဘဝ ဒီမျှပါပဲ ကို ရယ်။ ပြန်တော့နော်။”
ထား ရှိနေမည်ထင်သည့် နေရာသို့ မရောက်ရောက်အောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားသည်။ အမှောင်ထဲမှာ ကျင့်သားရပြီဖြစ်သော သူ့မျက်လုံးအစုံသည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရေးတေးတေးမြင်ရသည်အထိ ကူညီပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထား ဟုယူဆရသော ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုကို သူ ပွေ့ဖက်ကာ ထား နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ကို နမ်းရှိုက်ဖို့ သူကြိုးစားလိုက်သည်။
“မလုပ်နဲ့ ကို။ ကို အဲဒီလိုလုပ်လို့မရဘူး။”
ထားက ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူ့ကို တွန်းထုတ်လိုက်သည်။ ထား တွန်းထုတ်သည့် အရှိန်သည် မပြင်းပါ။ သို့သော် သူ အခန်းနံရံတွေဆီ လွင့်ထွက်သွားသည်။ နံရံနှင့် ရိုက်မိတော့ သူ့ကိုသူ ထိခိုက်မိပြီထင်ခဲ့ပေမဲ့ နံရံတွေသည် ဂျယ်လီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီး သူသည်လည်း နံရံတွေကြား နစ်မြုတ်ပျောက်ကွယ်သွားရတော့သည်။
ငယ်သံပါအောင် အော်ပေမဲ့ သူ့အသံက ထွက်မလာဘဲ လည်ချောင်းဝတွင်သာ တိမ်မြှုပ်ပျာက်ကွယ်သွားခဲ့ရသည်။
“ကို…။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်နေတာလား။”
ထား နှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရသည်မှာ အိပ်မက်လား တကယ်လား သူမခွဲခြားတတ်ပေမဲ့အရာရာသည် ကြည်လင်လွန်းလှသည်။ သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ဇောချွေးတွေ ပြန်နေသည်။ သို့သော် ထိုအကြောင်း မတွေးနိုင်ဘဲ ရုတ်တရက်ခေါ်သံကြောင့် သူ လန့်သွားသည်။ သူ တစ်ယောက်တည်း ရှိနေသည့်အိမ်၌ မည်သည့်နေရာက မိန်းကလေးရောက်လာပြီး သူ့ကိုလာခေါ်နေသနည်း… မက်ခဲ့သော အိပ်မက်နှင့် ဆက်စပ်တွေးမိပြီး သူ ချောက်ချားလာသည်။ ဟုတ်သည်။ ထားပြောတာ မှန်သည်။ သူ သရဲအရမ်း ကြောက်တတ်သည်။
အသံတင်မက ခြေသံကလည်း တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာသည်။ သူနှင့် ရင်းနှီးနေသော ရနံ့တစ်ခုကိုလည်း ရနေသည်။ မည်သူနည်း?
ထားတို့ဘေး ပတျဝနျးကငျြမှာ နာနာဘာဝတှေ၊ ဝိဉာဉျတှေ ရှိနတေယျ။ ပွီးတော့ ထားကလညျး ကို မွငျနကြေ ပုံစံမြိုး မဟုတျနဘေူးလေ
အခနျးထောငျ့ဆီမှ ချေါသံကွားရသညျ။ တိုးညှငျးသော အသံဖွဈပမေဲ့ သူ မကွားရတာ ကွာပွီဖွဈသော ထားအသံဆိုသညျကိုတော့ ကောငျးကောငျးသိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အသံလာရာဆီကို သူ တဈလှမျးခငျြး ရှသေ့ညျ။ နံရံပျေါကိုလညျး လကျနှငျ့ စမျးကာ မီးခလုတျတှကေို ရှာနမေိသညျ။
“မီးဖှငျ့လိုကျရငျ ကို မမွငျသငျ့တာတှေ မွငျသှားမှာစိုးလို့။”
“ဘာမြားလဲလို့ ထားရယျ။ ထားရဲ့ အဝတျမပါတဲ့ ကိုယျလား.. ကို မွငျနကေပြဲဟာ။ ဘာမှ မထူးဆနျးပါဘူး အခဈြရဲ့။”
Related Article >>> ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ… (အပိုငျး – ၆)
“မဟုတျဘူး ကို။ ထားပွောတာ ကို သဘောမပေါကျဘူး။ ထားတို့ဘေး ပတျဝနျးကငျြမှာ နာနာဘာဝတှေ၊ ဝိဉာဉျတှေ ရှိနတေယျ။ မီးဖှငျ့လိုကျရငျ သူတို့ကို ကို မွငျပွီး လနျ့သှားမှာ စိုးလို့။ ကို ကွောကျတတျတာ ထားသိပါတယျ။ ထား စကားနားထောငျနျော။ ပွီးတော့ ထားကလညျး ကို မွငျနကြေ ပုံစံမြိုး မဟုတျနဘေူးလေ”
“ဟုတျပါပွီ ထား ကမဖှငျ့စခေငျြလညျး ကို မဖှငျ့တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ထား က ဘယျလိုလို့ ဒီရောကျနတောလဲ။ ဒါ ကိုတို့ အိမျမဟုတျဘူး ထငျတယျ။ ကိုတို့ အိမျပွနျကွရအောငျနျော။”
“ထား ဘယျရောကျနတေယျဆိုတာ ပွောပွလို့မရဘူး ကို။ ထားတို့အိမျ မဟုတျတာတော့ ကို မှနျတယျ။ ဒီနရောက ထား တို့အိမျမဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့ ထား တို့ ဝိဉာဉျတှကေတော့ သဆေုံးပွီးနောကျပိုငျး ဒီမှာ ခဏနရေတယျ ကို။”
“သဆေုံးပွီးနောကျပိုငျး ဟုတျလား ထား။”
“ဟုတျတယျလေ ကို ရဲ့။ ကို မနေ့ပွေနျပွီလား။ ထား သသှေားပွီးပွီလေ ကို။ ထား တို့ သဆေုံးပွီး ဘယျနရောကို သှားရမယျ ဘာတှကေို ဆကျလုပျရမယျဆိုတဲ့ စီရငျခကျြ မကမြခငျြး ထားတို့ ဒီမှာပဲ နရေမှာ။ ဒီနရောကို ကို ဘယျလို ရောကျလာလဲဆိုတာ ထားလညျး သခြော နားမလညျဘူး။”
“တျောပွီ ထား။ အဓိပ်ပါယျမရှိတာတှေ မပွောနဲ့တော့ ကို တို့ အိမျပွနျကွရအောငျ။ ကို ထားကို လာချေါတာလညျး ဖွဈနိုငျတာပဲ။”
“အဓိပ်ပာယျမရှိတာတှေ ပွောနတော ကို ပါ။ သဆေုံးပွီး လူတဈယောကျက ဘယျလိုလုပျပွီး လူ့ဘဝကို ပွနျသှားနိုငျမှာလဲ။ ကို သာ အိမျရောကျအောငျ ကောငျးကောငျးပွနျပါ။ ပွီးတော့ ထားကို မနေို့ငျအောငျ ကွိုးစားပွီး ဘဝသဈတဈခုကို မွနျမွနျတညျဆောကျပါ ကို။ ကို့အနားမှာ ထားလိုမြိုး နားလညျ ပေးနိုငျမယျ့ မိနျးကလေး တဈယောကျကို အမွနျဆုံးရအောငျ ရှာပါ။ ကိုက တဈယောကျတညျး နနေိုငျမယျ့လူမြိုးမဟုတျဘူးဆိုတာ ထားကောငျးကောငျး သိပါတယျ။”
Related Article >>> ပွနျဆုံဖွဈခဲ့ရငျ… (အပိုငျး – ၅)
“တျောပါတော့ ထားရယျ။ မှားခဲ့တာတှအေတှကျ ကို တောငျးပနျပါတယျ။ ကို့ကို ခှငျ့လှတျပွီး အိမျပွနျခဲ့ပါတော့နျော။”
“ကို အခုထိ နားလညျသေးဘူးလား။ ထားတို့ ဘဝခငျြး ခွားနပွေီ ကို။ ထား ပွောတာ ကို သဘောပေါကျသငျ့တယျ။ ဟော ဟို ပွတငျးပေါကျကိုကွညျ့။ နရေောငျဝငျလာပွီ။ ကို အိမျ မွနျမွနျပွနျတော့။ ထားတို့ ဒီဘဝ ဒီမြှပါပဲ ကို ရယျ။ ပွနျတော့နျော။”
ထား ရှိနမေညျထငျသညျ့ နရောသို့ မရောကျရောကျအောငျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးတိုးသှားသညျ။ အမှောငျထဲမှာ ကငျြ့သားရပွီဖွဈသော သူ့မကျြလုံးအစုံသညျ ပတျဝနျးကငျြကို ရေးတေးတေးမွငျရသညျအထိ ကူညီပေးနိုငျသညျ။ နောကျဆုံးတှငျ ထား ဟုယူဆရသော ခန်ဓာကိုယျ တဈခုကို သူ ပှဖေ့ကျကာ ထား နှုတျခမျးလေးတှေ ကို နမျးရှိုကျဖို့ သူကွိုးစားလိုကျသညျ။
“မလုပျနဲ့ ကို။ ကို အဲဒီလိုလုပျလို့မရဘူး။”
ထားက ပွောပွောဆိုဆိုဖွငျ့ သူ့ကို တှနျးထုတျလိုကျသညျ။ ထား တှနျးထုတျသညျ့ အရှိနျသညျ မပွငျးပါ။ သို့သျော သူ အခနျးနံရံတှဆေီ လှငျ့ထှကျသှားသညျ။ နံရံနှငျ့ ရိုကျမိတော့ သူ့ကိုသူ ထိခိုကျမိပွီထငျခဲ့ပမေဲ့ နံရံတှသေညျ ဂယျြလီလိုမြိုးဖွဈနပွေီး သူသညျလညျး နံရံတှကွေား နဈမွုတျပြောကျကှယျသှားရတော့သညျ။
ငယျသံပါအောငျ အျောပမေဲ့ သူ့အသံက ထှကျမလာဘဲ လညျခြောငျးဝတှငျသာ တိမျမွှုပျပြာကျကှယျသှားခဲ့ရသညျ။
“ကို…။ အိပျမကျဆိုးတှေ မကျနတောလား။”
ထား နှငျ့ ဆုံတှခေဲ့ရသညျမှာ အိပျမကျလား တကယျလား သူမခှဲခွားတတျပမေဲ့အရာရာသညျ ကွညျလငျလှနျးလှသညျ။ သူ့ တဈကိုယျလုံးလညျး ဇောခြှေးတှေ ပွနျနသေညျ။ သို့သျော ထိုအကွောငျး မတှေးနိုငျဘဲ ရုတျတရကျချေါသံကွောငျ့ သူ လနျ့သှားသညျ။ သူ တဈယောကျတညျး ရှိနသေညျ့အိမျ၌ မညျသညျ့နရောက မိနျးကလေးရောကျလာပွီး သူ့ကိုလာချေါနသေနညျး… မကျခဲ့သော အိပျမကျနှငျ့ ဆကျစပျတှေးမိပွီး သူ ခြောကျခြားလာသညျ။ ဟုတျသညျ။ ထားပွောတာ မှနျသညျ။ သူ သရဲအရမျး ကွောကျတတျသညျ။
အသံတငျမက ခွသေံကလညျး တဖွညျးဖွညျး နီးကပျလာသညျ။ သူနှငျ့ ရငျးနှီးနသေော ရနံ့တဈခုကိုလညျး ရနသေညျ။ မညျသူနညျး?
Tags: again, back, Couple, Death, fiction, Fiction Series, love, Meet, Time
မာမီတိုင်းရဲ့ လက်သုံးစကားကြီး (၅)ခွန်း
Moe January 14, 2019
Date လုပ်တဲ့အခါမိန်းကလေးတွေမကြိုက်တဲ့ယောကျာ်းလေးတွေရဲ့အပြုအမူ(၅) မျိုး
Stella June 7, 2019